Ifulethi elizimeleyo lasemaphandleni kufutshane neZaragoza - I-Airbnb
Ifulethi elizimeleyo lasemaphandleni kufutshane neZaragoza
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguPilar
Indlu encinci epheleleyo kwidolophu eyi-45km ukusuka eZaragoza. Ilungele abantu ababini Igumbi elikhanyayo, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, ibalcony kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ngaphakathi. Umoya womoya kunye nokufudumeza.
Wifi. Igumbi elinomnyango owahlukileyo. igumbi lokulala elinye. Umthamo wabantu abane. Balala ababini kwibhedi yesofa. Kukumnyango wedolophu kwaye ecaleni kwegadi kunye nokuhamba okuhle ukonwabela indalo kunye noxolo
Indawo ezolileyo nepholileyo, iikhilomitha nje ezingama-45 ukusuka eZaragoza. Ukuba uza ngohola wendlela yaseMadrid, yi-12 km ukusuka kuhola wendlela. Ikwafikelelwa nayindlela iLogroño. Indlu encinci kodwa iphelele ngokupheleleyo. Kwaye ukuba kukho enye into efunekayo siyazama ukuyibonelela. Sineworkshop yeCrafts esiya kukuvuyela ukubonisa iindwendwe zethu. Kwakunye nomboniso wemisebenzi yesikhumba yeziqwenga ezizodwa
4.84 · Izimvo eziyi-148
ILumpiaque yidolophu encinci ekufutshane neZaragoza kwaye indlu ingaphandle kanye apho igadi iqala khona.Ukhumbule ukuba yidolophu ethule kakhulu engenazo iivenkile ezinkulu kwaye indlu isekuqaleni kwedolophu. Ivenkile enkulu yelali igqibelele kwaye banayo yonke into. Ikwavulwa kusasa ngeCawe. Kukho nomthengisi weentlanzi. Kukho imarike ngooLwezithathu nangooLwezihlanu kwindawo yedolophu. Sinemivalo emithathu, kwezimbini kuzo ungatya kwaye utye kakuhle kakhulu ngamaxabiso afanelekileyo. Kwi-4km e-Epila kukho zonke iintlobo zeevenkile ezivulwa ngokuqhubekayo. Iminyhadala yengcwele yabaxhasi yiSan Roque ngo-Agasti 16 kunye neveki yokuqala ka-Okthobha
Umbuki zindwendwe ngu- Pilar
Ndizozihoya ngokwam kwiindwendwe ukuba nangasiphi na isizathu ndihamba umntu endimthembileyo uzophatha I reception my phone number 680860556 noba yintoni. Ukubanceda kuyo nantoni na abayidingayo. Unako kwakhona ukufikelela kwindawo yokuhlala ngokusebenzisa ikhowudi ukuvula ibhokisi equlathe izitshixo, xa singekho ngelo xesha okanye iiyure ngaphandle kweeyure eziqhelekileyo.
Ndizozihoya ngokwam kwiindwendwe ukuba nangasiphi na isizathu ndihamba umntu endimthembileyo uzophatha I reception my phone number 680860556 noba yintoni. Ukubanceda kuyo nantoni n…